[Ankapobeny ] 19 Aogositra, 2008 10:08
Manararaotra diso tafahoatra ny JIRAMA
Tototry ny fahasahiranana ny tena ankehitriny iny aloha tsy afamiala @ maha olombelona ny tena, ary tsikaritry ny maro angamba fa tsy tafablaogy mihitsy aho tato ato izay ny vaovao anefa misy tokoa ka omeko eo ihany izay tadidiko.
Voalohany dia ny eo anivon'ny Jirama izay mahatohana ny mpanjifa tokoa ny ataony satria tsy misy tonga aty an-tranory zareo fa mitokona hono ka tsy nisy naka izany ny relevé efa ho 2 volana izao. Avy eo indray ny mpanjifa no asaina manoratra @ taratasy izay consommation lany eo @ kaontera ny jiro dia torak'izany koa ny rano. Mazava ho azy fa miakatra izay tsy izy ny consommation nao ao satria tonga dia volana roa be izao no indray mitambatra ao. Tsy manaiky anefa ry zareo raha mba miangavy ny tena oe aloha indroa ilay izy.
Faharoa kosa dia ilay lalao soabika @ Tvplus! izay tena hitako oe lasa mamoafady loatra ilay izy satria dia amboridana ireo mpifaninana tsy misy afa tsy takon'enatra kely sisa anaovana. Kanefa anie dia vehivavy lehibe efa renim-pianakavina daholo ny ao e! Manotany tena mihitsy aho oe misy lanjany tokoa ve ny fitafina anaovana eny an-koditra rehefa milanja!!! Asa aloha e! Manarak'izay dia ny toem-pasalamana ny mpifaninana izay tena mampiahiahy be ihany satria misy foana no torana ao ka sao dia mba hisy loza ny farana vao ho tonga saina ireo mpikarakara.
Farany dia any Suede ny Filoha ankehitriny, raha naka vakansy kosa ny mpikambana sasany ao @ governemanta.